Ahoana ny fiatrehana ny raharaha fanafihana any Dubai | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ahoana ny fiatrehana ny raharaha fanafihana any Dubai
Betsaka ny lalàna mihatra amin'ny raharaha fanafihana, arakaraka ny hamafin'ny raharaha. Ny fehezan-dalàna famaizana dia tsy voafaritra manokana momba ny sazy ho an'ny karazana tranganà fanafihana isan-karazany, fa manolotra rafitra hiatrehana izany. Ny fanafihana dia mety ataon'ny olona iray na vondron'olona amin'ny olona iray hafa, izay mety ho lasibatra tamin'ny tranga tokana na imbetsaka tamin'ny fanafihana vondrona.
Inona ny atao hoe Fanafihana?
Ny fanafihana dia azo faritana ho "fampiharana hery tsy ara-dalàna amin'ny olon-kafa". Ity karazana heloka bevava ity dia matetika antsoina hoe herisetra saingy tsy voatery ho ratra. Araka ny lalàna Emirà Arabo Mitambatra, ny fifandraisana ara-batana na fandrahonana dia heverina ho fanafihana, ary ny endrika rehetra dia eo ambanin'ny fehezan-dalàna famaizana andininy 333 ka hatramin'ny 343.
Misy karazana fanafihana telo tokony hotandremana rehefa miresaka momba ity lohahevitra ity: fanahy iniana, tsy miraharaha ary miaro tena.
Ny fanafihana niniana dia mitranga rehefa misy fikasana hahatonga ratra manokana amin'ny olona iray tsy misy antony ara-dalàna na fialan-tsiny.
Mitranga ny fanafihana an-tsirambina rehefa maratra ny olona iray amin'ny fanaovana tsirambina ny fikarakarana ilaina sy ara-drariny izay hampiasain'ny olona iray.
Ny fiarovan-tena dia azo ampiasaina ho fiarovan-tena rehefa voampanga ho nanao fanafihana ny olona iray amin'ny tranga izay nampiasany hery bebe kokoa noho ny tokony ho izy mba hisorohana ny ratra na ny fatiantoka.
Fanafihana amin'ny fitaovam-piadiana mahafaty: Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana fitaovam-piadiana na zavatra azo ampiasaina handratra mafy olona iray. Ny sazy ho an'ity karazana fanafihana ity dia ny fampidirana am-ponja sy ny fepetra takiana amin'ny fandoavana vola ra amin'ny lalàna silamo.
Fanafihana amin'ny fikasana hamono olona: Mitranga izany rehefa mitady hamono olon-kafa ny olona iray, saingy tsy nahomby tamin'ny fikasany. Mihatra koa izany rehefa mahatonga ny olona ho faty noho ny zavatra ataon'ny olona iray ny zavatra ataon'ny olona iray. Ity karazana fanafihana ity dia mitondra ny sazy an-tranomaizina ary mety ahitana ny fandoavana vola amin'ny rà araka ny lalàna silamo.
Fanafihana mahafaty: Rehefa misy olona mahafaty olona iray noho ny fanafihany, dia azo ampangaina amin’io fandikan-dalàna io izay misy ny fandoavana volan-dra.
Batterie niharatsy: Izany dia mihatra rehefa misy olona minia miteraka ratra mafy amin'ny olon-kafa, na raha manimba endrika na mety hiteraka fahafatesana ny ratra.
Fanafihana amin'ny bateria: Mihatra izany raha misy olona mikasa ny hiteraka fahavoazana ara-batana, saingy tsy mitovy amin'ny hamafin'ny hamafin'ny bateria miharatsy.
Battery: Raha misy olona minia mifandray amin'olona iray amin'ny fomba manimba na manafintohina tsy misy fanekena dia azo saziana an-tranomaizina ary mety tafiditra ao anatin'izany ny fandoavana vola ra araka ny lalàna silamo.
Fanafihana ara-nofo sy bateria: Ny fanafihana ara-nofo, mitovy amin'ny bateria, dia ny fikasihana fanahy iniana manafintohina na manimba izay manana toetra ara-nofo.
Fanafihana an-trano sy bateria: Ity heloka bevava ity dia misy fandrahonana am-bava sy hery ara-batana amin'ny olona iray hanao firaisana ara-nofo tsy misy fanekena.
Heloka Bevava ao Dubai
Miovaova be ny sazy mihatra amin'ny fanafihana, arakaraka ny toetry ny heloka bevava. Ny hamafin'ny heloka bevava dia tsaraina amin'ny fahavoazana naterak'izany ary na efa nomanina mialoha na tsia. Dubai dia manana politika tsy misy fandeferana amin'ny heloka bevava mahery vaika amin'ny fikasana hanabe ny mponina amin'ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina UAE. Araka izany, henjana kokoa ny sazy ho an’ny heloka bevava toy izany raha oharina amin’ireo izay manao fanafihana vokatry ny fifandirana manokana.
Ankoatra ny fanafihana dia misy fandikan-dalàna maro hafa azo heverina ho heloka bevava mahery vaika. Anisan'izany ny:
Fampihorohoroana – Tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana herisetra amin'ny Fanjakana, fampidiran-tahotra ao amin'ny tsirairay, ary fampirisihana herisetra amin'ny hafa.
Fakàna an-keriny - mihatra koa izany raha misy olona migadra sandoka, ary koa ny fakana an-keriny olona iray.
Fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny tsirairay – tafiditra ao anatin'izany ny fidirana tsy ara-dalàna ao an-trano na fiaran'olona ary manery azy handao ny fianakaviany na ny fireneny.
Halatra – Ny fidirana an-trano miaraka amin'ny fikasana hangalatra amin'ireo monina ao dia heverina ho heloka be vava miaraka amin'ny sazy an-tranomaizina henjana mifatotra amin'ny lalàna manan-kery.
Fanolanana – izay azo heverina ho herisetra noho ny toetrany manery olon-kafa handray anjara tsy araka ny sitrapony. Ny sazy amin'ny fanolanana dia fanagadrana sy/na onitra arakaraky ny hoe olona afaka na andevo ilay niharan-doza tamin'izany fotoana izany.
Fanondranana zava-mahadomelina - ity fandikan-dalàna ity dia mitaky fotoana an-tranomaizina tsy maintsy atao ary mety ahitana fandoavana vola be na amin'ny endrika lamandy na sazy.
Mila mpisolovava ianao amin'ny raharaha fanafihanao
Raha niharan'ny herisetra ianao na nisy olona nanandrana nanafika anao, dia ilaina ny mahafantatra ny lalàna napetraka momba ity heloka bevava ity. Ny Emirà Arabo Mitambatra no mifehy akaiky ny heloka bevava feno herisetra ary mety henjana ny sazy raha toa ka meloka.
Ny mpisolovava mahay iray izay efa niatrika ireo karazana tranga ireo taloha dia hanana ny fahaiza-manao hanampy anao hiaro ny zonao mba hahafahanao mifantoka amin'ny fitsaboana. Tena ilaina ihany koa ny mpisolovava iray amin'ny fanomezana fampahalalana momba ny lalàna manokana mifehy ny fanafihana any UAE, ary koa ny zavatra tokony andrasanao raha raisina amin'ny fitazonana polisy ianao.
Mpisolovava fiarovana amin'ny fanafihana any UAE
Raha resaka heloka bevava mahery vaika any UAE, henjana ny lalàna, ary mety hitondra sazy lehibe ny fandikana azy ireo. Ny fiampangana fanafihana dia matetika tonga miaraka amin'ny fotoana am-ponja na dia vokatry ny fifandirana manokana teo amin'ny olona roa aza ny fifandirana. Na dia tsy nieritreritra ny hanisy ratsy na hanafintohina aza ianao, ny fiarovan-tena dia azo raisina ho fanafihana izay mitondra lamandy na fotoana am-ponja. Izany no maha-zava-dehibe ny fananana mpisolovava Dubai avy amin'ny Amal Khamis Advocates and Legal Consultants eo anilanao mandritra ity dingana ity.
Ny fananana matihanina efa za-draharaha misolo tena anao dia mahatonga ny fiovana rehetra eo amin'ny fitsarana. Hahafantatra ny fomba tsara indrindra hiarovana anao amin'ny fiampangana izy ireo ary afaka miantoka fa voahaja ny zonao mandritra ny fizotran'ny fitsarana manontolo. Misy lafin-javatra maromaro izay miditra amin'ny didim-pitsarana mahomby, ary ny fahaiza-manaon'ny solontenan'ny lalàna mahay dia afaka manampy anao hahatratra izay mety ho tsy azo atao.
Fiampangana diso amin'ny Heloka Bevava
Na inona na inona vokatry ny fifandirana manokana na tsy niniana natao ny fanafihana, dia mety hitondra voka-dratsy lehibe ihany koa ny tatitra tsy marina momba ny zava-nitranga. Raha toa ka hita fa nanao fiampangana diso tamin'olona iray ny olona iray tamin'ny fikasana hanisy ratsy azy, dia azo ampangaina sy terena hanonitra izany fandikan-dalàna izany. Misy ny fepetra ara-dalàna napetraka mba hahazoana antoka fa azo porofoina ny fiampangana toy izany alohan'ny hamoahana ny didim-pitsarana, saingy ireo niharan'ny heloka bevava toy izany dia tokony ho tonga saina fa mety hisy fiatraikany amin'ny zavatra ataony.
Tokony hiresaka amin'ny mpisolovava Dubai avy amin'ny Amal Khamis Advocates and Legal Consultants haingana araka izay azo atao ny olona miatrika fiampangan'ny fanafihana mba hahafahan'izy ireo manomboka mamorona fiarovana tsara indrindra amin'ny fiampangana. Tsy vitan'ny hoe mahazo torohevitra ara-dalàna matihanina ireo solontena ara-dalàna ireo, fa manana fahaiza-manao ihany koa izy ireo hahazoana ny didim-pitsarana tsara indrindra ho an'ny mpanjifany.
Miresaha aminay anio mba hahazoana fifampidinihana voalohany maimaimpoana.